အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ခေတ်သစ် သစ်ခုတ်သမားပုံပြင်နှင့် ဘုရားသခင်ထံ ရေးတဲ့စာ
လိပ်စာအတိအကျမပါဘဲ ဘုရားသခင်သို့လို့ ရေးထားတဲ့ စာအိတ်ဟာ စာတိုက်ကို ရောက်သွားပြီးနောက် စာတိုက် ၀န်ထမ်းတွေက ဟာသတစ်ပုဒ်လို သဘောထားကာ အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းဖတ်ကြရင်း ၀န်ကြီးထံ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ကြီးကလည်း ကလေးငယ်ရဲ့ စာကို ဖတ်ရပြီးနောက် ရယ်မောကာ မကြာခင်က အသစ်တက်လာတဲ့ သမ္မတကြီး ရယ်စရာအဖြစ် ဖတ်ပါစေဟုဆိုကာ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးအား ၄င်းစာကို သမ္မတအိမ်တော်ထံ ပို့လိုက်စေပါတယ်။
သမ္မတကြီးက ကလေးရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး သဘောတကျ ရယ်မောကာ သူ့ရဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကို စာရေးတဲ့ ကလေးငယ်ထံ ပိုက်ဆံ ၂၀၀၀ ပို့ပေးလိုက်ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးက ပိုက်ဆံ ၅၀၀၀ ဆိုတာ ကလေးအတွက် များလွန်းတယ် လို့ စဉ်းစားမိပြီး အလဟဿ သုံးပစ်မှာစိုးတာကြောင့် ၂၀၀၀သာ ပို့ပေးဖို့ စိတ်ကူးရမိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ဟာ သမ္မတကြီးဆီက ပိုက်ဆံ ၂၀၀၀ ကို လက်ခံရရှိတဲ့အခါ ဘုရားသခင်က သူ့စာကြောင့် ဒီပိုက်ဆံကို ပို့လိုက်တယ်လို့ထင်ပြီး သိပ်ကို ပျော်ရွှင်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတစ်စောင် ပြန်ရေးဖို့ စဉ်းစားမိကာ စာတစ်စောင် ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ထံ ပိုက်ဆံပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
သို့သော်လည်း ဘုရားသခင် ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၅၀၀၀ဟာ ကျွန်တော့်ထံ ၂၀၀၀ဘဲ ရောက်လာပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၃၀၀၀ကိုတော့ သမ္မတကြီးက အခွန်တော်အဖြစ် ကောက်ယူထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ” တဲ့။
Latest Technology and Little Boy's letter to God (Funzug.com) အား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာအဖြစ် ဘာသာပြန်ပါသည်။
24 Responses to “ခေတ်သစ် သစ်ခုတ်သမားပုံပြင်နှင့် ဘုရားသခင်ထံ ရေးတဲ့စာ”
အမချောလဲ လက်ပ်တော့လေး ယူပြီး မြစ်ကမ်းဘေး သွားမထိုင်နဲ့နော်။ တော်ကြာ ဘလော့ဂင်းတောင် မလုပ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေဦးမယ်။
ကိုယ်ကိုကိုယ် တအား အထင်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက် သင်ခန်းစာပါပဲ၊
ဟား ဟား ကွန်ပျူတာသမားတွေ ထိသွားတယ် :P
Great computer story.
ဒီဘက်မှာလဲ အခွန်တွေ များမှများဘဲ။ အခွန်အပြင် VAT က ၀င်စွက်လိုက်သေး။
hee hee hee hee hee hee:
နတ်သမီးကလည်း စိတ်ကြီးလိုက်တား)
ပုံပြင်လေး ကောင်းပါတယ် .. ..
ကွန့်မန့်တွေဖတ်ရင်း အောက်ဖျားမှာ ပုံတပုံတွေမိတယ် လှတယ်ဗျာ နော် .. ခေါင်းစီးလေးက ဖေ့ဘွတ်ဆိုပြီးတပ်ထားတယ် .. သေချာကြည့်လေ ချောလေပဲ .. :)
ထိုင်နေလို့အကောင်းသား ထ သွားမှ
နှစ်ခုလုံး ရိုးပေမဲ့ကောင်းတယ်။
အစ်မချောရေ... စာလာဖတ်တယ်။ ခေတ်သစ် သစ်ခုတ်သမား ပုံပြင်က မဖတ်ရသေးပေမယ့် ဘုရားသခင်ထံ ပေးစာကတော့ ဖတ်ပြီးသားပါ။ အခုလို ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကဲ အခွန် ၃၀၀၀ ဖြတ်မယ်.. ဒါပဲ....... :)
ကုန်ပြုတာ ကိုရေထဲချကြည့်လိုက်မယ်.. ဟိဟိ.. နတ်သမီးပေါ်မလာရင် အစ်မချော အသစ်ဝယ်ပေး ... :P
ဒုတိယ ပုံပြင်ကိုတော့ ကြားဖူးတယ်၊ ပထမပုံပြင် ခေတ်သစ် သစ်ခုတ်သမားကို ဖတ်ပြီး ပြုံးမိသွားတယ်၊ ရေးထားတာလေး ထိသလို ဘာသာပြန်သူကလည်း အမိအရ ပြန်နိုင်တော့ ဖတ်ရတာ မြူးတယ်၊ ကျေးဇူးပါ မချောရေ...။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးရတယ်... အတော်နောက်တာပဲနော်..း)))
ပြုံးစေချင်တာရော။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိထားမိစေဖို့ပါ ရေးထားတတ်တဲ့ ချောရဲ့ စေတနာကို ပိုစ့်တွေထဲမှာ တွေ့လိုက်တယ်။ ကျေးဇူးပါ သယ်ရင်းရေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
နတ်သမီးကို အထင်သေးမိတာ မှားတာပေါ့။ ...ဘုန်းဘုန်းဆီကို မုန့်ဖိုး ငွေငါးထောင်ပို့ပေးပါ...စာအိတ်ပေါ်မှာတော့ ချောအစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ပဲ တပ်လိုက်မယ်...အဟိ။ ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ ချော။
I like both stories.2nd told me the innocence of child and 1st story told me the older one's mind:)TKS
Humor, YOu can't exist without it. You have to be able to laugh at yourself.Ohterwise, you suffer.
ဟာသမရှိရင် ဘ၀မှာရပ်တည်လို့မရဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီးဟားကို ဟားပစ်နိုင်ရမယ်။ မဟားနိုင်လို့ကတော့ ခင်ဗျား နာပြီသာမှတ်..။
အခွန် ၃၀၀၀ ပေးလိုက်ရလို.အားရပါးရ ရယ်သွားပါတယ်မချောရေ :)